कुन उमेरमा जन्माएको बच्चा हुन्छन् सबै भन्दा स्वस्थ ? जानी राख्नुहोस् बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर - Mitho Khabar
June 27, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on कुन उमेरमा जन्माएको बच्चा हुन्छन् सबै भन्दा स्वस्थ ? जानी राख्नुहोस् बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर
यदि महिलाको उमेर १९ वर्ष भन्दा कम रहेको छ भने ती महिलाले बच्चा जन्माउनको लागि केही समय कुर्दा नै राम्रो हुन्छ। उमेरले ३५ वर्ष नाघिसकेका महिलाबाट जन्मेका बच्चामा पनि डाउन्स सिन्ड्रोमजस्तो जन्मजात बिकार आउने सम्भावना धेरै रहेको हुन्छ ।
बच्चा कुन उमेरमा जन्माउँदा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने २० देखि ३० वर्षको उमेरमा जन्माउनु स्वास्थ्यको लागि ६० गुणा बढी फाइदा रहेको छ ।
१९ वर्ष भन्दा कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि गर्भवती महिलामा मृत्यु हुने जोखिम बढी हुन्छ । ढिलो विवाह गर्ने पुरुषहरुमा प्रजननशक्तिमा कमजोरी आउँछ । यस्ता पुरुषको शुक्राणुमा गति हुँदैन् ।
उमेर बढ्दै जाँदा पुरुषको शुक्राणु बन्ने संख्यामा समेत कमी हुन्छ । यस्ता पुरुषबाट कमजोरी बच्चा बस्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै बढ्दै गएको उमेरको कारण महिलाको अण्डाको गुणस्तरमा पनि ह्रास आउँछ ।
सुन्दर बन्ने चक्करमा भूलेर पनि नलगाउनुहोस् अनुहारमा यी चीज, झन् भइन्छ कालो र बुढो
बिहे गरि ल्याएको श्रीमतिको पहिला येति जना पुरुषसंग बिवाह भैसकेको थाहा पाएपछि…
नायिका पूजना प्रधानले दिपाश्रीलाई दिइन् दरिलो झापड ! २ वटा फिल्म हिट हुदैमा यति धेरै फुर्ति….